Git Sangit News » नयाँ स्मार्ट’फोन किन्दै हुनुहुन्छ भने यि कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस ।
बजारमा यति धेरै अनि राम्रा स्मार्टफोनहरु उपलब्ध छन् । यी फोनहरुमा आ-आफ्ना फिचर र विशेषताहरु छन् । सबै लोभलाग्दा छन् । कोही लुक्समा अब्बल छन् भने कोही सफ्टवेयरमा । कसैको ब्याट्री त कसैको क्यामेरा राम्रो छ । हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार आफूलाई सुहाउने स्मार्टफोन चयन गर्नुपर्दछ । स्मार्टफोन चयन गर्नुअघि तपाई यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस् ।
आफ्नो फोनमा क्यामेरा तपाई कतिको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? फोटोमा कतिको सौखिन हुनुहुन्छ ? सेल्फी र ब्याक क्यामेरा कुन धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यदि क्यामेरा र फोटोको सौखिन हुनुहुन्छ भने स्मार्टफोन हेर्दा क्यामेरा फिचरलाई पनि विशेष ध्यान दिनुहोस् । यदि रातमा फोटो लिने इच्छा छ भने लो लाइट नाइट मोड भएका ठूला सेन्सर क्यामेरा भएका फोनहरु लिनुहोस् । तर यस्ता फोनहरु केही महंगो हुने गर्छन् । दिनको समयमा फोटो खिच्न चाहनेहरूका लागि मिडरेन्ज देखि फ्ल्यागसिप जुनसुकै फोनमा पनि सुहाउने किसिमका क्यामेरा पाउन सकिन्छ ।
फोन खरिद गर्दा तपाईंले अत्यन्तै ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा भनेको फोनको ब्याट्री लाइफ पनि हो । किनभने यसले तपाईंको फोनको आयुलाई नै असर गर्दछ । तपाईं फोनमा टिकटक हेर्नुहुन्छ, फेसबुकमा न्युज फिड स्क्रोल गर्नुहुन्छ र ठूला साइजका गेमहरु खेल्नुहुन्छ भने तपाईले नयाँ स्मार्टफोन लिँदै गर्दा ब्याट्रीलाई ध्यान दिनुपर्छ । ब्याट्रीलाई मात्र होइन त्यसको किट चार्जरको क्षमतामा हेर्न नभोल्नुहोस् । वान प्लस एट प्रो फोनमा ३० मिनेटमै ५० प्रतिशत चार्ज हुन सक्ने क्षमता छ ।
एमोलेड डिस्प्लेले सधै उत्कृष्ट अनुभव दिन्छन् । यसमा कालो रंग एकदमै ओरिजिनल हुन्छ भने कन्ट्रास्ट एकदमै राम्रो र कलरहरु पन्ची हुन्छन् । अहिले बजारमा १२० हर्जसम्म रिफ्रेस रेट भएका स्क्रिन सहितका स्मार्टफोनहरु पाइन्छन् । यदि तपाईं फोनमा भिडियो फिल्महरु हेर्न वा खिच्न रुचाउनुहुन्छ भने फोर के स्क्रिन रेज्युलेसन भएका फोनहरु चयन गर्नुहोस् ।
आजभोलीका अधिकांश नयाँ फोनहरुमा हेडफोन ज्याक हुँदैनन् । यो केही विवादित विषय पनि हो । ज्याक पोर्ट सहितको फोनका आफ्नै सुविधाहरु थिए । तपाईंले जुनसुकै समय जता पनि अडियो ज्याक लगाएर भिडियो वा अडियो सुन्न सक्नुहुन्थ्यो । तर ब्लटूथ हेड फोनमा केही समस्या छन् । कहिलेकाहिँ कनेक्सन समस्यका कारण अडियो ल्याग हुने गर्दछ । ज्याक भएको हेडफोनमा यो गरिरहनु पर्दैन । यदि तपाईं हेडफोन ज्याकमै जाने हो भने गूगल पिक्सल फोर ए, एलजी भी ६०, सामसङ एस १० प्लस बजारमा उपलब्ध छन् ।
प्रकाशित मिति ८ आश्विन २०७७, बिहीबार १६:२७